फिचर स्टोरी Archives - Page 103 of 104 - Everest Dainik - News from Nepal
श्रीधर न्यौपाने२०७३, २३ पुष शनिबार
‘हैन, यो भाँडो कस्तो हो’?
गाउँमा गरिने अन्तर्क्रिया र छलफलले घरभित्रै चुलो चौका गरेर बसेका महिलाहरुको क्षेत्रलाई थोरै भएपनि बढाइदिएको छ । त्यहाँ सहभागी महिला तथा पुरुष मध्ये धेरैले त पहिलोपटक माइक समातेका थिए ।
उजिर मगर२०७३, २० पुष बुधबार
चन्द्रागिरि डाँडामा गगनले नभेटेका आफ्ना ज्वाइँ
‘मेरो परिवारको भावना जोडिएको छ चन्द्रागिरिमा । बहिनी गइनन् । म केही सञ्चालकहरुको कहरमा मन बाँधेर उक्लिएँ । जान मन थिएन । जहाँ पुग्दा मनले ज्वाइँ खोजि रह्यो । आखिरी यथार्थ सिन्दुरबिनाकीे बहिनी हुन । ज्वाइँको सपना हो । उनले यो जुनीमा देख्न पाएनन् । साँच्चै भगवान छन भने ज्वाइँले आफ्नो सपना अर्को जुनीमा देख्न पाउनु हुनेछ’,
काठमाडौं, पुस २० । कलंकी चोकमा बुधबार सव वे निर्माणको काम गर्दै कामदार । दुई वर्षमा सव वेको काम सम्पन्न भएपछि ...
रुद्रप्रसाद भट्टराई२०७३, २० पुष बुधबार
देशाटन, तिर्थाटन र पर्यटनको पर्याय– सिरूबारी
गाउँ पर्यटनमा “होमस्टे अर्थात घरबास” को उद्गमस्थलको रुपमा परिचित स्याङ्जाको सिरूबारी आज नमूना गाउँको नामबाट प्रशिद्ध छ । बास बस्ने ...
मकवानपुर, पुस १९ । दिना त्वाती लामा र जीवन लामाको जोडी भक्तपुरबाट मकवानपुरको दामन आएका छन् । दामनमा हिउँ परेको ...
उमा केसी२०७३, १४ पुष बिहीबार
युद्धमा पति गुमाएपछि एकल जीवनमै रमेका रोल्पाली महिलाहरु
श्रीमानको कार्यक्षेत्र प्यूठान आफू भने रोल्पामै । शान्ति सम्झौता हुनुभन्दा करिब दुई वर्ष पहिले सेनाको घेराबन्दीमा परी श्रीमान् गङ्गारामको निधन भयो । धनमायाका जीवनमा एउटा वर्ग संघर्षलाई माया गर्ने वर्गीय पक्षधरहरुको साइनो त थियो, तर, जीवनसाथीका लागि सधैं उनी एक्लै भइन् ।
२०७३, ३० मंसिर बिहीबार
जाने हाेइन त चित्लाङ्ग ?
सुन्दर नगर मकवानपूरको ग्रामीण क्षेत्र ‘चित्लाङ्ग’ आज लोकप्रिय स्थान बनेको छ । काठमाडौं उपत्यकाबाट नजिकै रहेको चित्लाङमा पुगेर फर्किन समस्या छैन । त्यहाँका सुन्दर दृश्यले मन लोभ्याउँछ । अनि लामो समयदेखिको कामको थकान मेटाउँछ ।
२०७३, २८ मंसिर मंगलवार
चितवनमा उपराष्ट्रपति पासाङको ‘जंगल सफारी’ (फोटो फिचर)
चितवन, २८ मंसिर उपराष्ट्रपनि नन्दबहादुर पुन ‘पासाङ’ले सोमबार र मंगलबार चितवनको भ्रमण गरका छन् । चितवन बसाईको क्रममा उहाँले चितवन ...
चार तस्वीरमा हेर्नुस नेवार समुदायकाे ज्यापु दिवस
आज मंसिर २८ गते काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर लगायत नेवार समुदायहरुमा ज्यापू दिवस भव्यताका साथ मनाइँदै । तस्वीर: इभा राजवाहक/एभरेष्ट ...